Dhaqaatirta Countiga Machakos oo ku goodiyay in aysan kasoo laaban doonin shaqo joojinta ay ku dhaqaaqen – The Voice of Northeastern Kenya
Dhaqaatirta Countiga Machakos oo ku goodiyay in aysan kasoo laaban doonin shaqo joojinta ay ku dhaqaaqen
Dhaqatirta ka howlgasha Isbitaalada ay maamusha Dowlada Maamul goboleedka Machakos oo goor sii horeysay ku dhaqaaqay shaqo joojin ayaa ku goodiyay in aysan dib ugu soo laaban doonin shaqadooda ilaa laga fulinayo dalabaadkooda.
Howlwadeenada caafimadka ayaa sheegay in talaabadaasi ay u qaaden sidii ay ugu dhiidhin lahaayen dhibaatada ay ku qabaan Isbitaalada Maamul goboledkaasi oo ay kamid yhihiin xaalada ay ku shaqeynayaan oo aad u xun.
Dhaqaatirta ayaa sheegay in ilaa iyo hadda Gavanaha Countigaasi uusan ka hadlin mise fulinin qodobo ay goor sii horeysay kula heshiiyen oo uu u balan qaaday in u wax ka qaban doono.
Ururka ay ku bahooben dhaqaatirta daaweynta cudurada kala duban ee dentistiyasha Ilkaha iyo farmishiyaasha ee magacooda loo soo gaabiyo KMPDU ee Countiga Machakos ayaa sheegen in shaqo joojinta ay si rasmi ah u bilaabatay Isniinti aynu soo dhafnay taas oo hadda ka dhigeyso in ay gashay maalinteedi shanaad.
Shalay oo khamis ahayd ayaa Gavanaha Countigaasi Alfred Mutua waxaa uu booqasha ku tagay Isbitaalada dowlada iyadoo bukaanada ay si aad u saameyeen shaqo joojintaasi waxa uuna u qabtay dhaqaatirta in 48 saacadooda ay ku soo labtaan shaqadooda hadii kale ay wajihi doonaan tilaabo ka dhan ah anshaxa taas oo hadda amarkaas uu u muqdo mid aan miro dhal noqon.
Dhanka kale wakiilada Countigaasi Machakos ayaa wal wal ka muujiyay dhibaatada ay shacabka Machakos ka dhaxli karaan shaqo joojintaasi waxayna ugu baaqen dowlada Countiga in sida ugu dhaqsiyaha badan wax oga qabato arintan.
Mas’uuliyintaasi ayaa sidoo kale ugu baaqay in Alfred Mutua uusan siyaasadeynin tilaabadaasi ay ku dhaqaaqen shaqaalaha Caafimaadka.
← Maxkamad kutaala Dalka oo wax dacwad ah ku weysay 40 muwaadin oo u dhalatay dalka shiinaha
Kooxda Daacish oo la sheegay in ay gacanta ku dhigeen kumanaan shacab ah oo ka qaxayey nawaaxiga magaalada Mosul →